खेलकुद Archives - NepalTrending
काठमाडौं- दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर एबी डी भिलियर्सले सबै फर्म्याटबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्।विश्व क्रिकेटका सर्वकालिन महन क्रिकेटरमध्ये एक ब्याट्सम्यान डी भिलियर्सले १७ वर्षे करियर टुङ्ग्याउँदै शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् सन्यासको घोषणा गरेका हुन्।...	Read more »
NepalTrending — November 18, 2021 add comment
काठमाडौँ– नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले आज बिहीबार घरेलु टोली कतारसँग अन्तिम तथा तेस्रो टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । दोहामा हुने तेस्रो खेल दिउँसो ३:४५ बजे शुरू हुनेछ । घरेलु...	Read more »
अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनेल मेस्सीले गोल ५० को अवार्ड जितेका छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई पछि पार्दै मेस्सीले गोल डटकमले प्रदान गर्ने २०२१ को अवार्ड जितेका हुन् । भोटिङको अन्तिम दिनसम्म रोनाल्डो अघि रहेपनि...	Read more »
NepalTrending — October 27, 2021 add comment
काठमाडौं । अब्दुल्लाह अलमुताइरी नै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षकको रुपमा रहने भएका छन् । उनले ती वर्षका लायिग सम्झौता नविकरण गरेका छन् । प्रशिक्षक अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कतार फुटबल संघ र...	Read more »
काठमाडौँ । फुटबल टिमका खेलाडीलाई जनही पाँच लाख पाउंने भय पछि अर्थमन्त्रीलाई खेलाडीहरुले धन्यवाद दियका छन् | सामाजिक संजालमा लेख्दै उनीहरुले धन्यवाद दियका हुन् | मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त...	Read more »
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनलपछि आफूलाई भविष्यबारे निर्णय लिन केहि समय चाहिने बताएका छन् । उनले फाइनलपछि नेपाल सधैं आफ्नो मुटुमा रहने बताउँदै...	Read more »
भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिप, नेपालको सपना अधुरै !
NepalTrending — October 16, 2021 add comment
काठमाडाैँ । साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेलमा नेपाल पराजित भएको छ । शनिबार माल्दिभ्सको राजधानी मालेस्थित माल्दिभ्स नेशनल फुटबल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल भारतसँग ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको हो । भारतलाई विजयी बनाउन...	Read more »
एक मिनेटको अन्तरमा भारतले हान्याे दुई गोल ! अब के गर्ला नेपाल ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल यतिबेला जारी रहेको छ । माल्दिभ्सको राष्ट्रिय फुटबल रंगशालामा जारी खेलको दोस्रो हाफको शुरुवातमा नै भारतले दुई गोलको अग्रता लिएको छ । भारतका...	Read more »
NepalTrending — October 14, 2021 add comment
काठमाडौं । नेपाली फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीले साफ च्याम्पियनसिप २०२१ को फाइनलपछि आफू नेपाल नफर्कने र आफूले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेको बताएका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको खेलपछि पत्रकारहरूसँग...	Read more »
NepalTrending — October 13, 2021 add comment
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्लुल्लाह अल्मुताइरीले पद त्यागको घोषणा गरेका छन् । आज नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा बंगलादेशसँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । यससँगै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको छ...	Read more »